पोखरा एयरपोर्टबाट कहिले उड्ला अन्तर्राष्ट्रिय हवाईजहाज ? - jagritikhabar.com
पोखरा एयरपोर्टबाट कहिले उड्ला अन्तर्राष्ट्रिय हवाईजहाज ?
क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा परिभाषित गरिएको पोखराको निर्माणाधीन विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा वृद्धि भएको छ । आईकाओले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्रै व्यवस्था गरेकोले पोखरा विमानस्थल अब अन्तर्राष्ट्रिय बनेको हो ।
स्तर फेरिए पनि थप संरचना बनाइएको भने होइन । २०७३ सालदेखि निर्माण सुरु भएको विमानस्थलबाट तोकिएको समयमै उडान हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ । विमानस्थल आयोजना र राजनीतिक दलहरूले सन् २०२१ को पहिलो दिनदेखि आन्तरिक उडान थाल्ने बताएका थिए ।
नेपाली नयाँ वर्ष अर्थात् १ वैशाख २०७९ देखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने दाबी गरिए पनि निर्माणको गति र सरकारी समन्वय अभावका कारण अझै एक वर्ष धकेलिने अवस्था छ ।
निर्माण कम्पनी सिएएमसीले आउँदो जुलाई अर्थात् असार मध्यसम्म सबै काम सक्ने बताएको छ । कम्पनीकै भनाइमा अब दशैंअघि पोखरा विमानस्थल सरकारलाई हस्तान्तरण हुन सक्दैन ।
विमानस्थलको काम ९० प्रतिशत सकिएको छ । कोभिडका कारण सम्झौता मितिअगावै सक्ने लक्ष्य पूरा हुन पाएन । विमानस्थलको भित्री काम सकिए पनि यहाँबाट विमान उड्न भने अझै अन्याेल कायम छ । विमानस्थलले विभिन्न १० वटा समस्या अघि सारेको छ, जसले सञ्चालनमा चुनौती खडा गर्ने छ ।